Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday – Hanohy ny hatrizay sa hiova amin’izay ?
Inty sy Nday – Hanohy ny hatrizay sa hiova amin’izay ?
Miandrandra fiovana hatrany ny vahoaka malagasy saingy indrisy fa lasan’ny sokajin’olona mitovy foto-kevitra pôlitika amin’izay nahongan’ny vahoaka hatrany koa ny fitondrana teto hatrizay. Na mpitondra nasandratra ny vahoaka tamin’ny alalan’ny tolona io na mpitondra nakarin’ny vahoaka tamin’ny alalan’ny fifidianana, dia ny nataon’ny tamin’ny Repoblika voalohany ihany no notohizan’ny Repoblika faharoa ary nitohy tamin’ny Repoblika fahatelo dia izao amafisin’ny mpitondra amin’izao Repoblika fahefatra izao.
Izany no isan’ny navoitran-dRajaonah Andrianjaka, mpitarika ny Otrikafo omaly, raha naneho ny heviny izy, ka navoitrany ny firosoana mankany amin’ny tena fanovana ka ialana ireo pôlitika namoehitra nampiharin’ny mpitondra nifandimby teto hatramin’izay.
Notsindrian-dRajaonah Andrianjaka fa « ny pôlitika maloto najadon’ny vahiny tamin’ny mpitondra nifandimby teto nandritra ny naha-Repoblika an’i Madagasikara no niteraka izao tsy fitsaharan’ny fikororosin’ny fiainam-bahoaka sy ny fahapotehan’ny firenena ary ny fahantrana lalina izao ». Navoitrany koa fa « ny fialana eo ambany vahohon’ny vahiny mpanani-bohitra mpandroba harena no vahaolana maharitra hiantoka ny fiadanan’ny vahoaka malagasy amin’ny alalan’ny fiarenan’ny toekarem-pirenena ».
Naveriny nitondrana fanazavana fa « ny fitrosana any ivelany toa izao nataontsika tato anatin’ny 57 taona izao dia mampahantra ny firenena mpitrosa fa mampandroso ny toekarenan’ny mpampitrosa, fa ny fitrosana ao anatiny no mampandroso ny firenena iray ». Manao izany fitrosana ao anatiny izany avokoa ireo firenena efa mandroso amin’izao fotoana, hoy izy.
Mety hisy hilaza angamba, hoy Rajaonah Andrianjaka, hoe « amin’ny fomba ahoana no hitrosan’ny fanjakana amin’ny ato anatiny nefa ny 95%-n’ny Malagasy dia miaina ao ambany fetran’ny fahantrana lalina ? » Marina izany, hoy izy, saingy amin’ny alalan’ny fiarovana ireo harem-pirenentsika izay trandrahina nefa tsy misy mijanona ho antsika no ahafahana miantoka izany. Dia notanisainy ireo tetik’asa efa tanterahina toy ny fitrandrahana fasimainty ataon’ny Qmm any Taolagnaro sy ny fitrandrahana harena ka sahanin’ny vahiny amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy, izay manana endrika fandrobana mihitsy.
Tsy maintsy ovaina izany rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tena tia tanindrazana, hoy Rajaonah Andrianjaka, ary tsy ny fifanarahana amin’izany ihany no havaozina raha manaiky ry zareo fa havaozina hatramin’ny tolo-barotra (appel d’offre), ary tsy maintsy ahodina eto ny akora voatrandraka mba hiteraka asa sy hampiakatra ny sandan’ilay vokatra, ary hamorona orin‘asa hafa mifanandrify amin’ny zavatra takian’ny fanodinana ireny akora ireny.
Ireo mpitondra nifandimby teto sy ireo miseho ho mpanohitra amin’izao fotoana dia mitovy foto-kevitra avokoa, dia ny findramam-bola amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena mahazatra, araka ny fepetra hatramin’izay, nefa efa hitam-poko hitam-pirenena fa nampahantra ny vahoaka malagasy, hoy ny mpitarika ny Otrikafo, fa pôlitika vaovao tsy miankin-doha nefa afaka mifanaraka amin’ny sehatra ahafahan’ny Malagasy iandrandrana ny tombontsoany no himasoana rehefa tonga eo amin’ny fahefam-panjakana ny Otrikafo. Ka hanohy ny hatrizay sa hiova amin’izay ?